Kayak Vagadziri - China Kayak Vatengesi & Fekitori
Paddle Imwe Kayak Inotengeswa
Inenge 20% yakareruka pane kutenderera kayak.
Zvakaenzana uremu kuGlassfiber kayak.
Yakasimba kupfuura Glassfiber / KV / Carbon kayak.
Iyo ABS yekubatanidza mahwendefa akavharidzirwa ne UV- isingagadziriswe Acrylic, inogona kuita iyo inopenya nzvimbo iyo yekutenderera kayak haina kumbove nayo.
Imwe Canoe Kayak
Kwakanaka kuita:Iyo 1-layer rotomolded polyethylene yekuvaka inopa musanganiswa wesimba uye kukanganisa kuramba izvo zvimwe zvinhu zvakawanda zvisingakwanise.
Dhizaini yakasarudzika: Paunenge uchigadzira iyo SeaDog Angler, hapana kuyedza kwakasarudzika mukugadzira kwakakwana kuita kwe 295cm / 9'8 `` sit-on-top hove kayak, uku ichiwedzera kugadzikana uye kugadzikana.
2 Vanhu Vanonyanya Kubata Hove Kayaking
Iyo yakajairwa yakarongedzwa backrest iri pachayo chinhu chitsva chakakodzera kutaura. Kwete chete iyo inopa yepamusoro yekutsigira rutsigiro uye inogonesa paddling mashandiro asi zvakare zvakare nyore zvakanyanya kubatanidza.
Gungwa Rokubata Ngarava Kayak
Iyi isina kujairika polyethylene kayak inokosheswa nevekuita-vane nyota vanofamba vachitsvaga yakatungika kayak yakasimba, inokurumidza, yakasimba uye inonakidza. Iko hakuna kuwanda kwakatenderedza - uye iyo Crunch inotarisawo chikamu.
Plastiki Hardboat Fishing Kayak
Izvo zvese ndezvekuita asiwo nezve zvinotaridzika. Hatisati tawana nani kutarisisa 11'5 '' kugara mukuraura kayak. Iyo Raider Angler ingangoita igwa rinoita zvirinani mukirasi yacho pamusika nhasi.
Vaviri Vanhu Gungwa Kubata Hove Kudzidzisa Canoe
Iyo Doubloon - iyo nyowani modhi kubva kuna Jolly Roger! Iyi compact tandem kayak zvese zvinoshanda uye zvakagadzikana pa510cm / 16'8 ”. Iyo dhizaini dhizaini yakagadzirisirwa zvese zvekuita uye kugadzikana kubvumira inonakidza uye yakachengeteka chiitiko kune vafambi.
Kudzidzisa Canoe Kayak Pedales
Kungofanana neveRaider vafambi vanowira kutaridzika kweBuccaneer. Iyo Buccaneer inomira kunze kwakawanda kunge pamusoro pemvura. Pa14'9 '' / 450cm iyi yakakwira yekuita zuva chikepe ine pachena kushanya kugona inofanirwa kuve kune chero munhu anotsvaga yekuvaraidza kayak nechimwe chinhu chinopfuura chenguva dzose.